मध्यरातमा वामदेवलाई ऐंठन हुने प्रधानमन्त्री पद नपाएर हो?
८ भाद्र २०७८, मंगलवार १४:३७ प्रकाशित
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अकल्पनीय रूपमा बर्दियाबाट चुनाव हारेपछि वामदेव गौतमले देश र जनताका नाममा एउटा सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधन मैले राजनीतिक रूपमा चुनावी मत परिणामपछि बोलेको सबैभन्दा ओझिलो वाक्यांशका रूपमा लिएको छु । उनले भनेका थिए- ‘प्राविधिक रूपमा मैले चुनाव हारें तर देशले जितेको छ, जनताले जितेका छन् ।’
मतगणनाको लगभग अन्तिम नतिजा आउन केही समय बाँकी रहँदा प्राविधिक रूपमा जिताउने कि भन्दै उनका कोटरीका बीचमा चर्कै बहस पनि भएकै हो तर त्यतिबेला उनै वामदेवले भने- ‘जनमतको सम्मान गर्ने हो, अरू कुरा छोड्नुस् ।’ यत्ति बोलेर उनी काठमाडौं लागेका थिय। उनले अन्तिम नतिजा पनि कुरेनन् । उनलाई अन्तर्घात गर्नेहरू पनि उनको अभिव्यक्तिमा नतमस्तक थिए ! तर काम सकेपछि दैलो देख्नुको कुनै अर्थ रहेन ।
मैले अनुभव गरेका नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेतामध्येमा सबैभन्दा प्रष्ट वक्ताको रूपमा पनि उनै वामदेव लाग्छ । मलाई लाग्छ उनी जे बोल्छन्, त्यो गर्छन् र जे गर्न सक्छन् त्यो मात्र बोल्छन् । शायद त्यही भएर उनलाई अलि बढी नै फलो पनि गरियो । अत्यधिक फलोले नदेखिने कुरा पनि देखिन्छ भने झैं उनको असली रूप पनि देखियो । कतिपय स्थानमा साउथ इन्डियन फिल्मको भिलेन झैं पनि भनेर भनिन्छ ।